Madaxweynaha Somalia oo kulan deg deg ah Garoonka Muqdisho kula yeeshay Beesha Caalamka,Maxase laga hadlay? – Puntlandtimes
Madaxweynaha Somalia oo kulan deg deg ah Garoonka Muqdisho kula yeeshay Beesha Caalamka,Maxase laga hadlay?
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii u kasoo laabtay magaalada Garoowe, wuxuu madaarka Muqdisho qeybta Nasashada gaarka ah kula gaar ah kula yeeshay Safiirada wadamada Caalamka qaarkood, gaar ahaana kuwa saameynta ku leh arrimaha Siyaasadda.
Safiiradda wadamada Mareykanka, Ingiriiska iyo Kusimaha Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midowbay u qaabilsan Soomaaliya, kaas oo looga hadlay arrimaha siyaasadeed ee dalka.
Warar hordhac ah oo la helayo ayaa sheegaya in kulankan ay Beesha Caalamku ugu gudbiyeen Madaxweyne Farmaajo dareenkooda ay ka qabaan xaaladda daka, gaar ahaana fashilka uu u soo dhamaaday kulankii Garoowe.
Safiirka Mareykanka oo hogaaminayay wafdiga Beesha Caalamka ayaa muujiyey welwelka ay qabaan iyo go`aamada ay gaari doonto Beesha Caalamka, si ay ubadbaadiyaan geedi socodka siyaasadeed ee dalka oo ay u arkaan muhiimad gaar ah.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qarisay kulankan, waxaana intii uu socday oo dhan si gaar ah u dhexmarayay Madaxweynaha iyo Wakiilada caalamiga ah oo doonaya in is faham laga gaaro xaaladdaha siyaasadeed ee waqtigan taagan.